क्रमशः यसरी हामीले अहिले चाहिँ सिङ्गै पार्टीमा दोस्रो काम के गर्छौं भने अहिलेको राजनीतिक प्रतिवेदनले जुन वैचारिक, राजनीतिक लाइन व्यवस्थित गरेको छ, संस्थागत गरेको छ, त्यसलाई सिङ्गो पार्टीमा एकरुप समझदारीका स...
पुस २६, २०७६, शनिबार
स्वाभिमान र स्वाधीन नेपालको ढोल बजाउँदै राष्ट्रवादको खोक्रो भाषण गरेर जनताको मन जित्न मात्र लालायित नक्कली राष्ट्रवादी नेता नेपालमा एकसेएक छन् । वास्तवमै राष्ट्रवादी नेताहरु त औंलामा गन्न लायक मात्रै छन् । औंलामा ग...
कामरेड, सर्वप्रथम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(मसाल)को केन्द्रीय समितिकोतर्फबाट पार्टीको आठौँ महाधिवेशनपछिको राष्ट्रिय परिषदको यो प्रथम बैठकमा उपस्थित पार्टीका सबै स्थायी र अस्थायी सदस्य तथा अन्य सबै सहभागी कामरेडहरूलाई...
पुस २१, २०७६, सोमबार
कालापानीको मुद्दा निकै ढिलै भएपनि ठीक समयमा आएको छ । वामपन्थीहरुले निकै चर्को रुपमा उठाउने गरेका यो विषय संयोगले वामपन्थीको नाममा दुईतिहाईको सरकार बनाइएको बेला जनस्तरमै अनुभूत हुने हुनेगरी आउनु आफैमा अव...
पत्रकारहरुमाझ नेताहरुलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न, ‘आफ्नैको किन आलोचना र विरोध ?’ [हेर्नुहोस् भिडियोसहित]
पुस १८, २०७६, शुक्रबार
पार्टीका अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अरु नेतागण र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरु ! सबैभन्दा पहिले त म यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु । प्रेस संग...
कात्रो किन्न चन्दा, किरिया बस्न छिमेकी घर (भिडियो पनि)
पुस १५, २०७६, मंगलबार
प्रेमको प्राण पर्यो । प्रेमकी एकल भाउजू मीराका हातगोडा गले । उपचार गर्न नसकेपछि मरेका देवरलाई घाट त लानु प¥यो । तर, लाने कसरी ? देवर बिरामी भएपछि ज्यालादारी छुट्यो । ज्यालादारी छुटेपछि खानेकुर...
हामी तपाईहरुलाई पर्चाकार बनाउन चाहन्नौं । पत्रकारै बनाउन चाहन्छौं । यो कुरामा तपाईहरु स्पष्ट हुनुहोस् । हामी तपाईहरुलाई पत्रकार बन्नकै लागि प्रोत्साहित गर्न चाहन्छौं, पर्चाकार होइन । तर, साथसाथै हामी तपाईंहरुलाई...
झारखण्डमा किन चलेन मोदी लहर ?
पुस ११, २०७६, शुक्रबार
बिहारबाट अलग भएर नयाँ राज्यको रुपमा झारखण्ड बनेको पनि १९ वर्ष भइसकेको छ । यसबीचमा ३ पटक विधानसभाको चुनाव भए र अस्थिरतामा गुज्रिरहेको झारखण्डमा अहिलेसम्म ६ जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । बाबुलाल मारांडीलाई झा...
कतै तपाईं हाम्रो वरपर पनि बाल यौनहिंसा भएको त छैन ?
पुस १०, २०७६, बिहिबार
बालबालिका विशेषगरी १२ बर्ष उमेरमुनिका बालबालिकालाई यौन हिंसा भनेको थाहा हुँदैन । बाल यौनहिंसा बालकको नजिकको व्यक्तिबाट हुने सम्भावना रहन्छ । परिवारको सदस्य, परिवारको निकटतम व्यक्ति, आफन्त, शिक्षक आदिबाट बाल ...